The Irrawaddy's Blog: လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်ထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်ထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
~သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ လေ၀င် လက်ဝင်လွယ်တဲ့ သင်္ကြန်ဝတ်စုံအကြောင်း လူပြောများနေပုံကို မစပ်စု သတင်းမှာ ဖတ်ပြီးကြပြီးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ကြော်ငြာ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးအလှအပ အားသာချက်ကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ထုတ်တတ်သူလို့ ပေါ့ပ်သတင်း ရေးသူတဦးက ပြောဖူးပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို နွေရာသီဝတ်စုံ၊ ရေကူးကန်ဝတ်စုံများနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်ရင်လည်း ဒီကလေးမ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။မြင်နေကျမဟုတ်တဲ့ ပုံတွေကို အွန်လိုင်းမှာ တွေ့လို့ ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဆရာအမည် မသိရသေးပါ။http://www.facebook.com/thinzarwintkyawfunclub?sk=photos ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာတော့ သင်ဇာရဲ့ ပုံတွေကို တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။~
ဒါအမေ့သားဘဂျမ်းကြီး http://nikonbaby.com ရိုက်တဲ့ ပုံတွေပါ
အနော်တို့ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက ၀တ်စုံနဲ့ပုံကိုပဲကြိုက်ပါတယ်။ အခုလို တအားပူနေတဲ့အချိန် မှာ ဒီဝတ်စုံနဲ့မကိုက်ညီလို့ပါ။ ဟဲဟဲ
Oh!!!!! Who is she? She is very very beautiful.
အဲဒါပြောတာပေါ့ စကားပုံတောင်ရှိသေး တသက်လုံးဖုံးသမျှ ဘာလုပ်မှပေါ်ဆိုလား
You should not say that. Please,you have to say gently.
အိုး.. ကောင်းလှချည်လား အဟက်.. ရှလွတ်
proud to be Hnar Bu, rather then ' Gandu ' .
these are beautiful. but the earlier ones are both beautiful and attractive and enticing.
မိဘမောင်ဘွားတွေရဲ့ မျက်နှာထောက်သင့်ပါသည့် သတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီးရယ်